Ungayisusa njani intsholongwane kwi-Android: Zonke iindlela | Iindaba zeGajethi
U-Eder Esteban | | Iiselfowuni, Tutorials
Ngamaxesha athile, abasebenzisi be-Android uyayibona indlela ifowuni yakho eyosuleleke ngayo yintsholongwane okanye i-malware. Le yinto ecaphukisayo, kuba ichaphazela ngokuthe ngqo ukusebenza kwesixhobo. Ukusukela ngesiqhelo unokufumanisa ukuba unentsholongwane kwifowuni kuba isixhobo sele siqalisile ukungasebenzi kakuhle okanye senza izinto ezithile ezingaqhelekanga kuyo.
Yintoni esinokuyenza ngezi zihlandlo? Into ebalulekileyo yile qhubeka nokususa intsholongwane kwifowuni. Kwi-Android kukho iindlela apho intsholongwane ingasuswa kwifowuni. Ke kubalulekile ukuba wazi amathuba akhoyo malunga noku kubasebenzisi.
1 Ingena njani intsholongwane kwi-Android?
2 Ungayisusa njani intsholongwane kwi-Android
2.1 Cima isicelo
2.3 Qala kwimowudi ekhuselekileyo
2.4 Ukubuyisela umzi mveliso
Ingena njani intsholongwane kwi-Android?
Kungenzeka ukuba yenye yezona zinto zingathandabuzekiyo abasebenzisi abaninzi banazo. Eyona nto ixhaphakileyo yile intsholongwane iye yangena xa isicelo sikhutshelwe. Yeyona ndlela iqhelekileyo apho intsholongwane ikwaziyo ukungena ukungena kwi-Android. Banokuba zizicelo ezazikwiGoogle Play. Ukusukela ngamanye amaxesha kukho iiapps ezilawulayo zokudlula kulo lonke ulawulo lokhuseleko olusevenkileni.
Nangona kunokuba kunjalo iiapps zikhutshelwe kwezinye iivenkile. Zininzi ezinye iivenkile ngaphandle kweGoogle Play. Kuzo unokufumana ii -apps ze-Android kwiimeko ezininzi ezingenakufumaneka kuGoogle Play. Zihlala zikwifomathi ye-APK, ezinokuthi zibonise iingxaki kwezi meko. Kuba uninzi lwezi venkile alunalo ukhuseleko olunevenkile esemthethweni. Kuyenzeka ukuba intsholongwane okanye i-malware inyonyobele kuyo.
Kungenzeka ukuba le app ngokwayo inentsholongwane. Ngamanye amaxesha, Thatha ithuba lokufumana imvume kwifowuni ukuze wenze. Ke ngoko, xa usetyenziso lufakwe kwifowuni ye-Android, kulungile ukukhangela iimvume zalo ngalo lonke ixesha. Akuqhelekanga ukuba i-app ye-flashlight ikucele ukufikelela kwimakrofoni okanye oonxibelelwano, umzekelo.
Ukuba kukho into engaqhelekanga efunyanwayo kwifowuni, njengoko isebenza kakubi (icima okanye yengozi rhoqo), isebenza kancinci kancinci kunesiqhelo, okanye ngequbuliso ubona iapp engafakwanga, lixesha lokuba ukrokrele ukuba kukho intsholongwane emnxebeni. Kule meko, kuya kufuneka uthathe uthotho lwezenzo kwi-Android, apho ukulungisa ingxaki kunye nokuvalelisa kwintsholongwane ekubhekiswa kuyo.
Njengoko besesitshilo, eyona ndlela ixhaphakileyo yokuba intsholongwane iye kwi-Android Kungenxa yesicelo esosulelekileyo. Ke ngoko, ukuba uqaphela ukuba ifowuni ayisebenzi kakuhle emva kokufaka le app, kusenokwenzeka ukuba ingumthombo wengxaki. Ke into ekufuneka uyenzile kukususa usetyenziso. Kwiimeko ezininzi oku kuhlala kunceda ifowuni ukuba isebenze kakuhle kwakhona. Nangona kunjalo, isenokungakuvumeli ukuba uyicime.
Ezinye iinkqubo ezinobungozi zicela imvume yomlawuli, ke akunakwenzeka ukuba uzicime kamva. Kodwa kuhlala kukho isisombululo kule ngxaki. Kuya kufuneka ufake useto lwe-Android emva koko kwicandelo lokhuseleko. Ngaphakathi kukho icandelo elithi "Abalawuli bezixhobo". Ukuba akukho koku, kunokwenzeka kwezinye iisetingi. Igama linokwahluka, kuxhomekeke kwifowuni yefowuni yakho.
Eli candelo likuvumela ukuba ubone ukuba ngaba kukho usetyenziso olunofikelelo kumlawuli. Kwimeko apho kukho naziphi ezingafanelekanga ukuba zibekho, siyaqhubeka nokususwa kwabo. Ke ngoko, siyayikhupha. Ngele ndlela, Ungasusa esi sicelo kwi-Android. Yintoni ekufuneka iphele ngentsholongwane. Makhe sibone ngokweenkcukacha indlela susa intsholongwane kwi-Android.
Kubasebenzisi abane-antivirus kwi-Android, kunokwenzeka ukuba uzisuse kunye nale software. Kwelinye icala, sinoMdlalo woKhuselo oza kwiifowuni ze-Android, ezihlala zilwa ne-malware. Kodwa ukuba unayo enye i-antivirus efakiweyo, uya kuba nakho ukuyisebenzisa kwaye ususe intsholongwane esefowunini ngale ndlela. Inokuba yenye indlela elula yokubulala nayiphi na intsholongwane eye yangena kwi-smartphone yakho.
Qala kwimowudi ekhuselekileyo
Ukuba khange ukwazi ukususa isicelo esenziwe kwi-smartphone yakho, kuya kufuneka ukhangele ezinye iindlela. Indlela yokuphelisa iingxaki kukuqalisa ifowuni ngendlela ekhuselekileyo. Ukuqala i-Android kwimodi ekhuselekileyo ikuvumela ukuba uqalise ifowuni ngendlela encinci, kwindawo yokhuseleko ethintela intsholongwane ekubeni ikwazi ukusebenza. Ngale ndlela, kuyakwenzeka ukuba babone intsholongwane esefowunini ngalo mzuzu kwaye bayivumele ukuba isuswe ngendlela elula.
Into eqhelekileyo kukuba ngaphakathi kuseto lwefowuni ye-Android sinethuba lokusebenzisa le boot kwimodi ekhuselekileyo. Kwiimeko ezininzi, nje cofa iqhosha lamandla kwimizuzwana embalwa, kude kuphume imo ekhuselekileyo yokuqalisa. Abanye abenzi be-smartphone bayibiza ngokuba yimowudi engxamisekileyo, ixhomekeke kuhlobo ngalunye.
Ukubuyisela umzi mveliso
Isisombululo sesithathu, nangona sigqithisile, ubuyisele umzi-mveliso. Le yinto ekufuneka yenziwe ukuba intsholongwane ayinakususwa. Kwakhona ukuba, nangona isusiwe, ibonisa ukuba i-Android ayisebenzi kakuhle. Ithatha ukuba yonke idatha kwifowuni iya kucinywa ngokupheleleyo. Zonke iifoto, iiapps okanye amaxwebhu akuyo aya kunyamalala umphelo. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba usoloko unekopi yogcino yonke into, ngaphambi kokuba uyicime.
Inokubuyiselwa kwimveliso ngeendlela ezahlukeneyo kwi-Android. Kwiimodeli ezininzi kunokwenzeka ukuba ukwenze ngaphakathi kuseto. Ngokwesiqhelo kukho icandelo lokubuyisela ngaphakathi kulo. Nangona ayizizo zonke iimveliso ezisebenzisa le nkqubo. Kuyenzeka ukuba ucime ifowuni. Emva koko, gcina iqhosha lamandla kunye nevolumu phezulu iqhosha (okanye ivolumu ezantsi ngokuxhomekeke kwifowuni) icinezelwe imizuzwana embalwa. Kude kuphume imenyu yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Kuyo kukho uthotho lwezinto onokukhetha kuzo, enye yazo kukuseta kwakhona iFektri. Ke ukusebenzisa ivolumu phezulu nasezantsi amaqhosha, olu khetho lunokufikelelwa. Ke, kuya kufuneka ucinezele kuyo ngeqhosha lamandla. Siqhubeka nokubuyisela ifowuni yomzi-mveliso. Ngele ndlela, I-smartphone yethu ye-Android ibuyela kwimeko yayo yentsusa, kanye njengokuba ishiya umzi-mveliso. Ukungabi nentsholongwane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ungayisusa njani intsholongwane kwi-Android
I-Sonos iphucula izixhobo ze-Sonos One kwesi sizukulwana sesibini